Hutano Dziviriro - Wanhe Maindasitiri uye Kutengesa Co, Ltd.
Zviri nyore uye nemari kuisa pamusoro penzvimbo dzakasiyana siyana. Hunhu hwenheyo hauna kukwirira. Haityi kutsemuka, hapana kunetseka kwekutsvaira uye kutsunga. Huswa hwekuisira hwakasvibira nharaunda, chigadzirwa chakapedzwa chakavakwa, nguva yekuvaka yakatarwa uye ipfupi, mhando yacho iri nyore kugona, uye kugamuchirwa kuri nyore.
Kurongeka kwese kweyakagadzirwa turf yemitambo yeminda yakanaka, chiyero chekushandisa chakakwirira, iyo hupenyu hunogona kusvika anopfuura makore masere, uye inogara yakasimba uye isingagadziriswe, uye inogona kushandiswa ichienderera zuva rese.
Chakagadzirwa huswa chiri nyore kuchengetedza, kudhura kwekuchengetedza mitengo, zvinongoda kushambidza nemvura kubvisa tsvina, uye zvine hunhu hwekusasvava uye kusiri kushanduka.
Chakagadzirwa turf ine hunhu hwekuvhunduka kunwa, hapana ruzha, kuchengetedzeka uye kusagadzikana, kusimba, uye kudzora kwemoto kwakanaka. Iyo yakakodzera kushandiswa kwechikoro uye parizvino ndiyo nzvimbo yakanakisa yekudzidzira, zviitiko, uye makwikwi.
Chakagadzirwa turf inotora pfungwa yekuchengetedza uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kudzivirira kukuvara kwemitambo. Inopa masimba akakwana ekudzivirira kudzora kukanganisa kunogona kukonzereswa neyakaomarara pasi kusvika kutsoka, kuti usununguke zvachose kubva kuzvinhu zvakasiyana siyana zvinokonzerwa nenzvimbo.
Kutevedzera Grass Carpet, Tsvina Yakagadzirwa, Bhora Turf Uswa, Chakagadzirwa Gorofu Grass, Astro Turf Nhandare Yemunda, Landscaping Grass Yenzvimbo Yenzvimbo,